नेपाल आइडलको अडिसनमा १७ वर्षे किशोरीको बबाल र्‍याप, हेर्नुहोस् भिडियो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेपाल आइडलको अडिसनमा १७ वर्षे किशोरीको बबाल र्‍याप, हेर्नुहोस् भिडियो
"नेपाल आइडल" प्रथम संस्करणको अपार सफलता पछि नेपाली दर्शकहरू समक्ष यसको दोश्रो संस्करण एपिवान टेलीभिजनमा सुरु भएको छ।
बिहीवार प्रसारित पहिलो एपिसोडमा भैरहवा अडिसन प्रसारण गरिएको थियो भने शुक्रवार प्रसारित दोश्रो एपिसोडमा धनगढीको अडिसन प्रसारण गरिएको छ । यस धनगढी अडिसनमा एक यस्ता प्रतिस्पर्धीको आगमन भयो जले निर्णयकलाई खसी मात्र पारेनन् छक्क पनि पारे ।
अट्टलिया, कैलालीबाट आएका १७ वर्षे किशोरी करिष्मा विष्टले यस्तो बबाल र्‍याप गाए अडिसन राउन्डमा की सबै जजहरु चकित परे । उनले आफ्नो जीवन या आजभोली युवापुस्तामा हुने समस्यालाई र्‍याप बनाएर स्टेजमा प्रस्तुत गरेका थिए जुन आजभोली सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । उनी थिएटर राउण्डको लागि छनोट पनि भइन् भने आगामी एपिसोडमा उनले के प्रस्तुती दिने हुन् त्यो भने हेर्न बाकीँ छ ।
अघिल्लो सिजनकै निर्णायक न्हयु बज्राचार्य, काली प्रसाद बास्कोटा र इन्दिरा जोशी रहने नेपाल आइडलको प्रस्तोतामा भने रिमा विश्वकर्मासंग नयाँ अनुहार देख्न पाइने भएको छ । उक्त नयाँ अनुहार टेलिभिजन कार्यक्रम, टि भि सि निर्माता, गायक तथा अभिनेता आसिफ शाह हुन् ।
नेपाल आइडलको पहिलो संस्करणमा पोखराका बुद्ध लामाले पहिलो स्थान प्राप्त गर्दै पहिलो नेपाल आइडल बन्न सफल भएका थिए भने निशान भट्टराई र प्रताप दास क्रमश दोश्रो र तेश्रो बन्न सफल भएका थिए ।
‘मन जित्छ उसले, सुमधुर गाउँछ जसले’ भन्ने नारा रहेको प्रतियोगितामा शीर्ष विजेताले २० लाख नगद, एउटा कार, एल्बम सम्झौता र वल्ड टुर प्याकेज अथवा ५० लाख नगद जित्न सक्नेछन् । हेर्नुस् भिडियो :